Sosialy Archives - Page 136 sur 154 -
Faritra mitoka-monina : Hananganana hopitaly lehibe amin’ity taona ity
22/02/2017 admintriatra 0
Ny fahasalamana no voalohan-karena ka tsy azo atao ambanin-javatra. Manana fanamby lehibe ny hanangana hopitaly lehibe any amin’ireo toerana lavitra andriana sy mitoka-monina ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny minisitera misahana ny fahasalamam-bahoaka amin’ity taona 2017 ity. …Tohiny
21/02/2017 admintriatra 0
Anisan’ny tetikasa goavana ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Asa Vaventy ny fanamboarana ilay lalam-be migodana na “autoroute” mampitohy an’Antananarivo amin’ny Toamasina. “Efa an-dalam-pahavitana, izay vinavinaina ho amin’ny faran’ny volana Marsa izao, ny fitsirihana io “autoroute” …Tohiny
Famahana ny olan’ny fantson-drano : Nandray andraikitra ny prezidansa
20/02/2017 admintriatra 0
Misedra olana goavana ny faritra rehetra eto an-drenivohitra indrindra rehefa vanim-potoanan’ny orana vokatry ny tsy fisian’ny fenitra eo amin’ireo fatson-drano isaka ny elakelan-trano. Tsy dia nisy ny orana nandritra ny vanim-potoanan’ny fahavaratra tamin’ity taona ity, …Tohiny
Mananjary : Tafapetraka ny ivon-toerana miady amin’ny herisetra
18/02/2017 admintriatra 0
Ho fisantarana ny fankalazana ny andron’ny vehivavy amin’ny 8 Martsa ho avy izao, lanonana 5 samihafa no nanamarika ny datin’ny 17 Febroary omaly, tany Mananjary, faritra Vatovavy Fitovinany nandritra ny fitsidihana nataon’ny minisitry ny Mponina …Tohiny